Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Hery R…: “Nihena hono ny Malagasy mahantra tamin’ny fitondrany”
Filoha Hery R…: “Nihena hono ny Malagasy mahantra tamin’ny fitondrany”
Nihoraka ny vahiny nasaina teny Iavoloha raha vao avy niteny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa nihena ny tahan’ny fahantrana teto Madagasikara nanomboka ny taona 2014 nitondrany ny firenena. Nolazainy tamin’izany kabary niezinezina izany fa 92% ny Malagasy no tao anatin’ny fahantrana lalina tamin’io fotoana io, ary nidina ho 72% amin’izao taona 2018 hiafaran’ny fitondrany izao. Raha atao ny kajy dia nihena 20% izany fahatrana izany. Nihoraka sy nitehaka no navalin’ny mpanatrika ny fety io. Nifampibitsibitsika nefa ny maro ary nihomehy sy valaka ny ankamaroany rehefa avy eo. Fihomehezana no niafaran’izany hoan’ireo izay nifanakaiky sady nifampikitika. Asa na manamarina ny filazan’ny filoham-pirenena ny dikan’ireny na maneso azy satria dia hafahafa ihany ny fihetsikin’ny mpanatrika. Ny mpanaraka ny fahitalavitra taty ivelan’ Iavoloha dia tonga dia nihoraka hoe: “izany kosa ve dia marina e!”. Hatramin’ny mpiasam-panjakana nanaraka tao ampiasana avokoa no tafatsangana raha naheno izany ary nanakiana mafy hoe: “ angaha rehefa maro ny fiara 4×4 sy ny fiara eto Madagasikara dia nitombo ny isan’ny mpanakarena?”
Fa mba mahagaga ihany ny tarehi-marika voalazan’ny filohan’ny repoblika Hery Rajaonarimampianina io. Avy aiza ary iza no nanao ny fanadihadiana tamin’izany? Ny fikambanana iraisam-pirenena nefa dia manambara fa i Madagasikara no isan’ireo firenena efatra mahantra indrindra eran-tany ary be kolikoly indrindra. I Liberia sy RDC na Repoblika demôkratikan’i Congo izay rotikin’ny ady no milahatra amin’i Madagasikara ny taona 2017 iny amin’ity fahantrana lalina mahazo ny firenena aty atsimon’i Saharaha ity. Ny volana oktobra 2016 dia nanambara ny mpahay toekarena Malagasy Hugues Rajaonson fa ny 97% ny Malagasy dia mahantra avokoa Ny fiakaran’ny fiharikarena ho 3 na 4% tamin’ny taona 2017 iny ve dia nampihena ny fahantran’ny Malagasy toa izany?
Na inona na inona aloha no filazan’ingahy Hery Rajaonarimampianina fa nihena ny tahan’ny fahantrana eto Madagasikara dia sarotra ny hinoana izany. Tsy mino izany koa ny Malagasy rehetra. Tao anatin’ny efa-bolana farany ny taona 2017 iny dia nidina ny sandan’ny vola Malagasy ka ny “euro-1” dia tafakatra ho 4000ariary raha toa ka 3600 ariary izany teo aloha. Ny vidin’ny vary dia niakatra 100% ka raha novidina 70 000ariary teo izany roa volana lasa izay dia vidina 120 000 ariary izany manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Izany ve dia mbola ilazana fa nihananan-karena ny Malagasy nefa tsy nisy loza voajanahary akory niseho teto amin-tsika. Asa izay hahazo amin’izao fahatongavan’ny rivodoza AVA izao satria efa tafiakatra 3000 ariary ka hatramin’ny 4000 ariary ny kapoakan’ny vary any amin’ny faritra Sava iny, izany hoe manodidina ny 10 000 ariary ny iray kilao.
Amin’isika miteny izao dia tsy mahavoaloa ny volan’ny fisondrota-karama intsony ny fanjakana ary tsy afaka manefa ny tambikaraman’ireo mpiasam-panjakana tokony hahazo izany, efa ho iray taona izao. Izany ve no nihatsara ny fiainan’ny vahoaka? Ny mpiasam-panjakana miisa 17000 mahery aza notapahina ny karamany tamin’ny volana desambra 2017 lasa teo iny satria hono matoatoa, nefa dia mpiasam-panjakana ara-dàlana izao ary tonga miasa ara-dàlana. Ary mbola milaza ny Praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly fa mbola hitohy izany fanapahana karama izany tamin’ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety ny faran’ny herinandro ny taona lasa iny. Mandeha ny resaka fa hatsahatra ny fandoavana ny vola 5% isan-jaza hoan’ireo mpiasam-panjakana misotro ronono manomboka amin’ny taona 2018 ity. Izany ve dia mihamanan-karena ny firenena sy ny Malagasy nefa ny olona nahavita be tamin’ny fanjakana aza nampahatrana indray?
Maro no azo resahina amin’iny fanambarana tao anatin’ny kabarin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina iny.
Aoka ny Malagasy tsirairay avy no hanambara na nihanahantra izy na nihananan-karena tamin’izay efa-taona nitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay. Marina ve ny voalaza ny filoha sa tsia fa nihena ny isan’ny tahan’ny fahantrana? Ny ankamaroan’ny olona naheno aloha dia nilaza fa fandatsana azy iny kabary iny satria na ny vary fihinana isan’andro aza izao no zara raha mahita hohanina amin’izao fotoana izao.